Velcro Discs sy ny PSA Discs
faran'izay lehibe eny Cut-kodiarana
Non-tenona fiovana haingana Discs
fiovana haingana bokotra
Ceramic Marokoroko sy heny
1.Characters ny CA atao amin'ny Sol-gel fomba
CA, vokatry ny Sol-gel fomba, dia karazana sintered Marokoroko sy voamaina. Noho izany koa atao hoe toy ny SG Marokoroko sy vary. Ny lafiny kristaly dia madinika indrindra, izay ihany no 100-500nm, dia tonga ny iray ihany no latsaka ny mahazatra isan-jato corundum haben'ny kristaly. Ny tapa-46 # vary misy an'arivony tapitrisa poti kristaly. Rehefa-mitoto vary, ny voa ny nentim-paharazana herinaratra fused alumina ho fisaka sy deactive, ary mora ho afaka tamin'ny Marokoroko sy fitaovana eo ambanin'ny mitoto hery. Ny fanompoana ny fiainana fohifohy kokoa. Na dia izany aza, fa CA, izany hoe SG Marokoroko sy heny, ny manao dingana iray manontolo ihany koa ny tena Ampitomboy dingana. Nandritra ny fanompoana ny fiainana, ny vaovao maranitra lelan-mitoto vary dia mampibaribary passivating foana rehefa tonga voa tsara krystaly azy amin'ny fikitroha-mitoto vary fitaovana eo ambanin'ny hery, izay mahatonga ny voa foana ao amin'ny toerana maranitra. Noho izany, ny fitaovana Marokoroko sy atao amin'ny CA dia ela velona ny tarika, tsara Ampitomboy tena mahay, fanapahana avo fahombiazana, ary koa ny tsy mirehitra workpieces.
Noho ny hafa microstructure, CA mampiseho fahasamihafana eo amin'ny fitondran-tena tapaka Marokoroko sy heny. CA mampiseho eny an-krystaly tapaka simba, raha nentim-paharazana herinaratra fused alumina mampiseho transgranular tapaka simba. Noho izany, ny mikasika ny Fahasarotana ny CA dia indroa noho ny an'ny sarambabem fused alumina.
CA vokatry ny Sol-gel fomba toy izany koa manana zavatra simika sy ny hamafin'ny ho WFA (White Fused Alumina). Noho ny fanamiana rafitra microcrystalline kely, mikasika ny Fahasarotana avo sy fampisehoana tapaka kely, CA be azo ampiasaina noho ny fikitroha-sarotra-to-dingana fitaovana toy ny fitaovana vy, mafy Stainless vy, hafanana-mahatohitra firaka vy, etc.
2.Features ny Marokoroko sy fitaovana atao amin'ny CA
(1) Ny voa dia tena maranitra, izay mahatonga izany dia manana fahafahana matanjaka fanapahana, avo Fitotoana Vary fahombiazana. Azo ampiasaina amin'ny lalina lehibe fanapahana, Roughing fahana, adidy mavesatra sy avo fahombiazan'ny Fitotoana Vary. Araka ny fanandramana, dingana mpitovo dia afaka hahatratra 0.3mm sakafo na mihoatra, vy fanesorana ny tahan'ny dia mihoatra noho ny in-droa ny mahazatra corundum Fitotoana Vary kodiarana.
(2) tsara mikasika ny Fahasarotana, abrasion kely, sy fikitroha kodiarana amin'ny fihazonana endrika tsara. Fa fametrahana mazava tsara endrika Fitotoana Vary sy mitoto vary, ambony kokoa amin'ny lafiny marina sy tsy miovaova endrika habe azo mora nahazo.
(3) High mateza sy ny asa fanompoana ela velona. Mety hahatratra 5 to10 fotoam-mahazatra corundum Fitotoana Vary kodiarana. Low fanoloana matetika dia afaka hampihena ny fotoana sy ny fikarakarana mpanampy haka aina, izay mahatonga azy ho sahaza ny fampiasana ny isa fanaraha-maso milina mandeha ho azy, tonga saina mandeha ho azy ny famokarana.
(4) Tsara-tena Ampitomboy fampisehoana, fa tsy clogging. Mety foana kijanona Fitotoana Vary fampisehoana, mampihena ny fanitsiana (ihany no tokony ho 1/3 ny mahazatra corundum Fitotoana Vary kodiarana) ary hanatsara ny vokatra fahombiazana.
(5) Amin'ny-mitoto vary fampisehoana, CA-mitoto vary kodiarana dia tsara lavitra noho ny mahazatra corundum Fitotoana Vary kodiarana. Fa Price, CA dia ambany lavitra noho ny CBN sy diamondra abrasives, raha ny hamafin'ny dia mitovy amin'ny an'i mahazatra fused alumina, izay mahatonga azy tsy mila fitaovana manokana Fitotoana Vary sy ny fitaovana fanitsiana. Noho izany tsy misy fepetra manokana ho an'ny mitoto vary fitaovana ary tsy nanamboarany olana raha oharina amin'ny CBN sy diamondra abrasives. Koa tsy misy fepetra manokana ho an'ny mitoto ranon-javatra. Noho izany, dia mora ny hamelatra ny fampiasana azy io.
1.Chemical Firafitra (Typical zava-dehibe):
2. Ara-batana Index:
hakitroky (g / cm3) Ball-mitoto vary mikasika ny Fahasarotana Crystal Size
Previous: fametrahana mazava tsara fanapahana kodiarana
Blue Ceramic Marokoroko sy voa
Sg Marokoroko sy Grain
White Ceramic Marokoroko sy voa